Ogaden News Agency (ONA) – Maxaabiistii Bayaxow oo Muuqaalo Bahdilaad Ah Laga Soo Duubayo.
Maxaabiistii Bayaxow oo Muuqaalo Bahdilaad Ah Laga Soo Duubayo.
Posted by ONA Admin	/ July 30, 2018
Wararka naga soo gaadhaya gudaha Ogadenya gaar ahaan Xarunta Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) ayaa sheegaya in kooxda dabadhilifka ah ee magaalada Jigjiga fadhiisinka utahay ay soo wado muqaalo been abuur ah oo lagasoo duubay naftood hurayaasha ku xaraysan banka Bayaxow.
Wararka ku soodhacaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya in Maxaabiista lagu adoonsado banka bayaxow laga soo qaaday sawiro iyo muuqaalo been ah oo lagaga horqadayo guryihii lagu dhisayay ee lagu adoonsanayay iyo ciqaabta aan kala joogsiga lahayn ee ay maxaabiistu ku jiraan.
Naftood hurayaasha ayaa lagu qasbayaa inay sheegtaan nimco iyo nolol fiican oo ayna waligoodba arag wax dhibaato ah, Waxaana lagu amrayaa inay amanaan dhiigyacab Cabdi Ileey. Waxaa la leeyahay waxaad dhahdaan anagoo fikirkanagii aaminsan ayaan qalin wax kubaranaa taasoo gabi ahaanba been ah.
Maxaabiista lagu adoonsado banka Bayaxow oo Godey iyo Qalaafe u dhaxeeya ayaa waxay dhisaan guro wax leh aan ilaa hada la aqoonin. Maxaabiistan oo mudo dheer kusoo qaatay xabsiga ciqaabta badan ee Jeel Ogaden ayaa halkii lagasii dayn lahaa ee daryeel cafimaad iyo baan naftooda sooceliso laga siin lahaa ayaa ciqaab tiihore kaxun ay la kulmeen.